कांग्रेस नेतृत्वले हेक्का राखोस्– हराउने, जिताउने हाम्रो हातमा छ
फरकधार / ४ भदौ, २०७८
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस कास्की सभापति कृष्ण केसीलाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
विधानको व्यवस्था हुने हो भने हामीले एक वर्षअघि नै कांग्रेसको महाधिवेशन गरिसकेको हुनुपथ्र्यो । तर, हामीले सकेनौँ ।
विधानको व्यवस्था गर्न नसके पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार ६ महिना थप्ने छुट पनि हामीले अब गुजारिसकेका छौँ । त्यसैले पनि अब संविधानअनुसार होस् या विधानअनुसार नै किन नहोस्, अधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यतामा हामी रहेका छौँ ।
यस्तो किन पनि भने अधिवेशन नगराउने हो भने पार्टीको स्थापना कालदेखिको इतिहास समाप्त हुने निश्चित छ, अर्कोतिर यसअघि अधिवेशनका लागि विभिन्न विषय बाधक बनेका थिए ।
यस्तो बाधक भएका तीन विषयमा पहिलो त कांग्रेसको क्रियाशिल विवाद नै हो । कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता विवाद आजको दिनसम्म पनि पूर्णरुपमा टुंगिएको छैन । हामीले सिफारिस गरेर पठाएका क्रियाशिल सदस्यहरुले सदस्यता पाउँछन् कि पाउँदैनन्, यो कुरा अहिलेसम्म केन्द्रबाट आएको छैन । हाम्रो पार्टीको क्रियाशिल सदस्य को हो भन्ने अहिलेसम्म टुंगिएको नै छैन ।
फेरि यही समयमा विश्व महामारी कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण पनि हामी समस्यामा परेका छौँ, यसको भयावह अवस्था अहिले पनि छ । अब फेरि तेस्रो वेभ वा लहर आउँछ भन्ने पनि सुनिएको छ ।
कोरोनाका कारण जुन अवस्था आएको छ, यसले गर्दा हजारौँ वा सयौँ क्रियाशिल सदस्यलाई एक ठाउँमा राख्न सक्ने अवस्था छैन, प्रतिनिधिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि छ ।
महाधिवेशनका लागि बाधक बनेको तेस्रो कुरा मलाई यो वर्षाको समय हो भन्ने पनि लाग्छ । कृषिप्रधान देशमा किसानहरुको समस्यालाई पनि मध्यनजर गर्दै अधिवेशन गर्ने समयबारे हामी सबैले चासो दिनैपर्छ, यसबारे गम्भीर हुनै पर्छ ।
त्यसैले पनि कि पार्टीको वैधानिकता सकिए सकियोस् भन्ने हामीले सोच्नु पर्यो, अन्यथा सबै परिस्थितिका बाबजुद पनि महाधिवेशन त गर्नैपर्छ ।
अहिले फेरि सारेर १८ भदौमा वडा तहको अधिवेशन, २७ भदौमा स्थानीय तहको अधिवेशन गर्ने भनिएको छ । हो, अहिले तोकिएको समय हिजोको भन्दा उपयुक्त छ । तर, जसरी हुन्छ, महाधिवेशन गर्नैपर्छ, महाधिवेशन हुनैपर्छ ।
शीर्ष नेताहरुसँग हामी जिल्लाका नेताहरुले बारम्बार भन्दै आएका छौँ— हाम्रो पार्टीको तल्लो तहको कमिटी बनाउँदा देखि नै माथिल्लो तहको कमिटी बनाउँदासम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएको हाम्रो इतिहास छ । अहिलेको परिस्थितिमा हामीले सबै क्रियाशिल सदस्यले तल्लो तहको अधिवेशनमा उपस्थित हुने कुरा संभव छैन् । स्थानिय तहका कार्यसमिति समेत क्षेत्रीय समितिबाट गर्ने सहज परिस्थिति बनाएकोले महाधिवेशन गर्नसक्ने परिस्थिति देखिएको छ । देशमा निषेधाज्ञा नै लगाउन पर्ने अवस्था फेरि कोरोनाभाइरसले निम्त्यायो भने अर्कै कुरा, नत्र अब हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन रोक्नु हुँदैन ।
यो अधिवेशनको बारेमा मैले भन्दै पनि आएको छु । अधिवेशन नगर्दा हाम्रो पार्टी सकिन्छ । जुन तिथि मितिमा हामीले अधिवेशन गर्दैछौं । यो राजनीतिक सैद्धान्तिक बहस नभई प्राविधिक बहस हो । हाम्रो पार्टीले अंगिकार गरेका दर्शन, सिद्धान्त र नीति कार्यक्रम सकिँदैन । अधिवेशन गर्दा पार्टीको मर्मा सकिँदैछ । अधिवेशन नगर्दा पार्टी सकिँदैछ । अधिवेशन गर्दा पार्टीको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिवेदनहरु पास गरेर गयौं, त्यो पछि सैद्धान्तिक लाइनको आधारमा हाम्रो संगठनको गतिविधि के भए ? जनताकाबीचमा पार्टीले कति सकारात्मक काम गर्यौं भन्ने हुन्छ । अघिल्लो अधिवेशनको यी सबै कुराहरुलाई समीक्षा गर्दै आउँदो अधिवेशनको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल हुनुपर्छ पहिलो कुरा ।
अहिले हामीले अधिवेशन गर्दैगर्दा विगतको समीक्षा गर्न पनि सम्भव छैन, नयाँ नीतिको बारेमा भोलिको बारेमा छलफल गर्ने अवस्था पनि छैन् । पार्टीले १४ औं महाधिवेशनले लिने सैद्धान्तिक र नीतिगत महाधिवेशन हुने भयो । यसले तल्लो तहबाट केन्द्रीय नेतृत्वको मात्र छनौट गर्नेभयो ।
नेपाली कांग्रेसभित्र देखिने विवाद र बहस भनेको ०७ सालबाट लिएर ०६१÷०६२ सम्म आउँदा सबै पदाधिकारी नेताहरु बनेका छन् । कांग्रेसभित्रको अहिलेको गुट उपगुट जुन देखिएको छ यो सबै नेताहरुबीचको टसल हो । नपाउने र पाउनेबीचको प्रतिस्पर्धाबाट नपाउनेले नपाएरै जाने र पाउनेले दोहोर्याएर पाउने भएको हुनाले एउटा पदमा भएका सबैले अरु साथीहरुलाई अवसर दिँदा हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले अहिले पार्टीको सभापति वा पदाधिकारी मात्र खोजेको छैन्, सिंगो कांग्रेसलाई समेटेर एकैठाउँमा ल्याएर हिँड्नसक्ने नेतृत्व खोजेको छ । पार्टीभित्रको द्धन्द्ध व्यवस्थापन गर्नसक्ने नेतृत्व चाहियो ।
जसरी गणेशमानजी पार्टीभन्दा बाहिर रहेर देशमा छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूलाई पनि एक ठाउँमा उभ्याएर अघि लानुभएको थियो, त्यसरी नै अहिले अउने नेतृत्वले पनि सोच्नसक्ने हुनुपर्छ । अभिभावक बन्ने खालको नेतृत्व आउन सक्यो भने कांग्रेसभित्र र बाहिरका दलहरुको समस्या समाधान हुनेगरी आउन सक्नुपर्छ । अहिले तँ उठ्ने कि म उठ्नेभन्दा पनि परिस्थिति अनुसार चल्न सक्ने नेतृत्वको विकास हुनुपर्छ । अभिभावकको रुपमा अबको नेतृत्वले उहाँहरुले उभ्याउन सक्नुभयो भने अर्को एक दुई जना गणेशमान कांग्रेस बाटै जन्मनसक्छ । एउटाले अर्कोको कमजोरी देखाएर आउने नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन् । पुराना नेताहरुको सम्मान गर्दै अहिलेको नेतृत्वमा भएका नेताहरु र बाहिरका अन्य नेताहरूबाट अभिभावक बन्नेखालको नेतृत्वको विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सारा कुरा सुम्पिएर होमिएका मान्छेहरु कांग्रेसमा छन् । कसैको छोरा वा नाति भएर हामीले नेतृत्वमा ल्याउँदै छैनौं । हिजो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो त्याग र तपस्या भएका नेताहरु हुनसक्छ, गणेशमानको परिवारबाट, कोइराला परिवारबाट, देउवा परिवारबाट वा पौडेल परिवारबाट आएको । तर, उहाँहरुको त्याग र तपस्या हुँदाहुँदै कोही नेतृत्वमा आउँछ भने त्यसलाई हामीले परिवारवादसँग जोडेर हेर्नुहुँदैन् ।
त्यो परिवारको हिजोका सदस्यले राजनीतिक परिवर्तनका लागि पुर्याएको योगदान र उहाँहरुले पनि पार्टीमा पुर्याएको योगदानलाई परिवारसँग जोडेर हेरिनुहुँदैन्। कांग्रेसभित्र ठूलो ठूलो परिवर्तनमा योगदान पुर्याएका नेताहरु हुनुहुन्छ । अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका परिवारका सदस्यहरुको बारेमा यस्तो कुरा हुन हुँदैन् । परिवारवादबाट आएर नेतृत्व एकैपटक लिएको छ भन्ने कुरा मान्य हुँदैन यतिबेला नेपाली कांग्रेसमा । कांग्रेसलाई समय अनुकुल नेतृत्व लिएर चलाउँछ भने उहाँहरुको ल्याएको भावनाबाट अघि बढ्दा कांग्रेस पार्टी राम्रो हुन्छ ।
कांग्रेसलाई समय अनुकुल, समय सापेक्ष र जनताको चाहना अनुरुप भावना अनुसार नेतृत्व लिएर चलाउन सक्छ भने महाधिवेशनमा आउँछ भने उहाँहरुको धारणलाई हामी सहयोग गर्छौं । अन्यथा हामीसँग उहाँहरुलाई हराउन सक्ने र जिताउन सक्ने दुवै सामर्थ्य छ । हामी कार्यकर्ताहरु काम गर्नसक्ने र नसक्ने दुवैलाई हेरेर जिताउने र हराउने सामर्थ्यका साथ बसेका छौं । यो कुरा नेतृत्वले हेक्का राखोस् ।
(केसी नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति हुन् ।)
कांग्रेसको मान्यता र सिद्धान्त करेक्सन गर्न आवश्यक छ— तनहुँ सभापति
‘युवाहरुले धारणा नबदल्ने हो भने नेतृत्वमा आउँदैनन्’— भक्तपुर
प्रकाशित मिति : भदौ ४, २०७८ शुक्रबार २०:४४:७,